Jeremaya 20 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
20 Pash-họ nwa Ịma,+ bụ́ onye nchụàjà na onyeisi ndị na-elekọta ọrụ n’ụlọ Jehova,+ nọ na-ege Jeremaya ntị mgbe ọ na-ebu amụma, na-ekwu ihe ndị a. 2 Pash-họ wee tie Jeremaya onye amụma ihe+ ma tinye ya n’ọtọsị+ dị n’Ọnụ Ụzọ Ámá Mgbago nke Benjamin, nke dị n’ụlọ Jehova. 3 O wee ruo n’echi ya na Pash-họ tọhapụrụ Jeremaya n’ọtọsị,+ Jeremaya wee sị ya: “Jehova agụwo gị+ Ụjọ dị ebe niile,+ ọ bụghị Pash-họ. 4 N’ihi na nke a bụ ihe Jehova kwuru, ‘Lee, m ga-eme ka ị bụụrụ onwe gị na ndị niile hụrụ gị n’anya ihe ụjọ, gị onwe gị ga na-ele ha anya+ mgbe ndị iro ha ga-eji mma agha gbuo ha;+ m ga-enyefe Juda dum n’aka eze Babịlọn, ọ ga-adọrọ ha n’agha laa Babịlọn ma were mma agha gbuo ha.+ 5 M ga-enyefe ihe niile a kwakọbara n’obodo a na ihe niile e mepụtara na ya na ihe niile dị oké ọnụ ahịa dị n’ime ya n’aka ndị iro ha; m ga-enyefekwa akụ̀ niile nke ndị eze Juda n’aka ndị iro ha.+ Ha ga-akwakọrọ ha, bukọrọkwa ha laa Babịlọn.+ 6 Ma gị onwe gị, Pash-họ, na ndị niile bi n’ụlọ gị, a ga-adọrọ unu n’agha;+ ị ga-aga Babịlọn, ọ bụ n’ebe ahụ ka ị ga-anwụ, ọ bụkwa n’ebe ahụ ka a ga-eli gị na ndị niile hụrụ gị n’anya,+ n’ihi na i buworo ha amụma ụgha.’”+ 7 Jehova, ị ghọgbuwo m, m wee bụrụ onye a ghọgburu aghọgbu. I ji ike gị megide m, i wee merie m.+ Aghọrọ m onye a na-achị ọchị ogologo ụbọchị dum; onye ọ bụla na-akwa m emo.+ 8 Mgbe ọ bụla m na-ekwu okwu, m na-eti mkpu. Ọ bụ ime ihe ike na ibukọrọ ihe mmadụ ka m na-eti ná mkpu.+ N’ihi na okwu Jehova ghọrọ ihe na-ewetara m nkọcha na mkparị ogologo ụbọchị dum.+ 9 M wee sị: “Agaghị m ekwu okwu banyere ya, agakwaghị m ekwu okwu n’aha ya.”+ Ma n’ime obi m, ọ dị ka ọkụ na-ere ere nke e mechibidoro ụzọ n’ime ọkpụkpụ m; ike wee gwụ m ịgbachi nkịtị, enweghịkwa m ike idi ya.+ 10 N’ihi na anụrụ m akụkọ ọjọọ nke ọtụtụ ndị na-akọ.+ Ụjọ dị ebe niile. “Kọsaanụ ya, ka anyị kọsaa akụkọ ọjọọ banyere ya.”+ Onye ọ bụla na-asị m, “Udo dịrị gị!”—ha na-ele anya ka m tewe ụkwụ, ha na-asị:+ “Ikekwe, a ga-aghọgbu ya,+ ka anyị wee merie ya ma megwara ya ihe o mere anyị.” 11 Ma Jehova nọnyeere m+ dị ka dike dị egwu.+ Ọ bụ ya mere ndị na-akpagbu m ga-eji sụọ ngọngọ wee ghara imeri.+ Ihere ga-eme ha nke ukwuu, n’ihi na ha agaghị enwe ihe ịga nke ọma. A gaghị echefu mmechuihu ha nke ga-adịru mgbe a na-akaghị aka.+ 12 Ma gị onwe gị, Jehova nke ụsụụ ndị agha, na-enyocha onye ezi omume;+ ị na-ahụ akụrụ na obi.+ Ka m hụ ọbọ ị ga-abọ n’ahụ́ ha,+ n’ihi na emewo m ka ị mata okwu ikpe m.+ 13 Bụkuonụ Jehova abụ! Toonụ Jehova! N’ihi na ọ napụtawo mkpụrụ obi ogbenye n’aka ndị na-eme ihe ọjọọ.+ 14 Ka ụbọchị a mụrụ m bụrụ ụbọchị a bụrụ ọnụ! Ka ụbọchị nne m mụrụ m ghara ịbụ ụbọchị a gọziri agọzi!+ 15 Onye a bụrụ ọnụ ka nwoke ahụ bụ nke bịara zie nna m ozi ọma, sị: “A mụworo gị nwa nwoke!” O mere nnọọ ka ọ ṅụrịa ọṅụ.+ 16 Nwoke ahụ ga-adị ka obodo dị iche iche Jehova kwaturu n’enweghị mwute ọ bụla.+ Ọ ga-anụ mkpu ákwá n’ụtụtụ, nụkwa mkpu agha n’etiti ehihie.+ 17 Gịnị mere na o gbughị m mgbe m nọ n’afọ, ka nne m bụrụ ili m, ya eburu afọ ime ruo mgbe a na-akaghị aka?+ 18 Gịnị mere m ji si n’afọ nne m+ pụta ka m bịa hụ ọrụ ike na iru uju,+ ụbọchị ndụ m ewee gwụchaa naanị n’ihere?+